Posted by ကို Tranquillus | နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
သင့်အား ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပွဲတစ်ခုသို့ ဖိတ်ကြားထားနိုင်သော်လည်း သင်မတက်ရောက်နိုင်ပါ။ ဤကိစ္စများတွင်၊ သင့်အား ဖိတ်ကြားချက်ကို ပေးပို့သူအား အသိပေးရန်၊ သင်၏ငြင်းဆိုမှုကို တရားဝင်ဖြစ်စေရန်၊ အီးမေးလ်က. ဤဆောင်းပါးသည် သင့်အား ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပွဲ ဖိတ်ကြားချက် ငြင်းပယ်သည့်အီးမေးလ်ကို ရေးသားခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်အချို့ကို ပေးပါသည်။
သင်တစ်ဦးဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ, သင်အင်တာဗျူးမှဟုတ်သို့မဟုတ်လုံးဝမဖြေဆိုရန် D-Day ကိုအခမဲ့ရှိမရှိယေဘုယျအားစောင့်ပါ။ တစ်ငြင်းဆန်၏အမှု၌, သင့်အက္ခရာဖြစ်ရပ်သင်စိတ်ဝင်စားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ပါဝင်ကြသည်မဟုတ်သောအထင်အမြင်မပေးရန်သတိထားဖြစ်ရမည်။
သေချာပေါက်အသေးစိတ်ကိုသို့သွားစရာမလိုဘဲသင့်ရဲ့ငြင်းဆန်တရားမျှတ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ငြင်းဆန်စိတ်ရင်းဖြစ်ပါသည်ကြောင်းကိုသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြသရုံနဲ့မလုံလောက်, အရှင်စနစ်တကျအီးမေးလ်တစ်စောင်ငြင်းဆန်ရေးသားဖို့ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအစွန်အဖျား။
သင့်အီးမေးလ်ကသူ၏ဖိတ်ကြားချက်ကိုအဘို့သင့်အင်တာဗျူးကြေးဇူးတငျခွငျးအားဖွငျ့စတင်ပါ။ သို့ပြုလျှင်သင်၏ငြင်းဆန်တရားမျှတ။ အီးမေးလ်တစ်လျှောက်လုံးယဉ်ကျေးများနှင့်အကင်းပါးသောနေဖို့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပစ္စုပ္ပန်ဆင်ခြေနှင့် (က overdoing မပါဘဲ) လာမယ့်အချိန်တခုဖွင့်လှစ်ခွင့်အလမ်းထားခဲ့ပါ။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အီးမေးလ်က template ကို သင်၏ကျောင်းမှနောက်ကျောကျောင်းမဟာဗျူဟာကိုတင်ပြရန်နံနက်စာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဥပမာအားဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖိတ်ကြားချက်ကိုသင်ငြင်းဆိုကြောင်းဖော်ပြရန် -
အကြောင်းအရာ: [နေ့စွဲ] နံနက်စာဖိတ်စာ။
[နေ့စွဲ] အပေါ် reentry မဟာဗျူဟာ၏နံနက်စာတင်ဆက်မှုရန်သင့်ဖိတ်ကြားချက်ကိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်မဖောက်သည်တွေနဲ့ချိန်းကြောင့်နံနက်ဖြစ်၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံမကောင်းစွာပဲငါတက်ရောက်ရန်လို့မရပါဘူး။ ငါသည်ဤနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ရပ်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကမျှော်လင့်ခဲ့လို့ငါရှိဖို့မစိတ်မကောင်းပါဘူး။
[လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး] ကျွန်ုပ်၏နေရာတွင်ပါ ၀ င ်၍ ဤအလွတ်သဘောတွေ့ဆုံမှုအတွင်းပြောဆိုခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်အားပြန်လည်အစီရင်ခံနိုင်သည်။ ငါနောက်တစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာရှိနေဆဲ!
တစ်ငြင်းဆန်ဖော်ပြအီးမေးလ် template ကို သြဂုတ်လ 26th, 2020Tranquillus
လွန်ခဲ့သောအီးမေးလ်က template ကိုအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိ၎င်း၏ပါဝင်မှုကိုကြေညာရန်
အောက်ပါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးမှတောင်းပန်အီးမေးလ် template ကို